महामारीलाई विर्सिने हो की, त्यसबाट पाठ सिक्ने ?
वीरगंज । भनिन्छ विपत बाजा जाएर आउदैन । हो विपत बाजा बजाएर आउदैन तर आई सके पछि धेरै पाठहरु सिकाएर जान्छ । विपतबाट ढलेका शहरहरु विकसित रुपमा तयार भएका कति उदारणहरु छन । विपत पछि गरिने विकास निर्माणका काम होस वा व्यतिmगत निर्माणका काम होस त्यसमा धेरै ध्यान दिईन्छ र धेरै ठाउँमा दिईएको उदारणहरु पनि छन । अहिले पनि विश्व व्यापीरुपमा कोभिड १९ को महामारी चलिरहेको छ । यस हाम्रो जिवन शैलीलाई फेर बदल गरिदिएको छ । यसबाट पनि हामी पाठहरु सिक्न सक्छौ र सिकेका पनि छौ होला । तर अहिले छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिडको नयाँ भेरियन्टका कारण लकडाउन हुने अवस्थमा आई पुन्दा हामी कोरोना विर्सेको अवस्थामा छौ । विपत आएको बेलामा आतिने तर अघिपछि मातिने हाम्रो बानी कहिले जान्छ । गत विहिबारमा मात्र वीरगंज नाकामा भारतबाट आएका ६ जनामा कोभिड पोसेटिभ भेटियो । एकातर्फ नयाँ भेरियन्ट हाम्रो नजिक आईसकेको छ भने अर्काे तर्फ हामी कोरोना महामारीलाई विर्सेर रमाईरहेका छौ । आखिर पछिल्लो समय महामारीले दिएको पिडा विर्सिेने हो की त्यसबाट पाठ सिक्ने ?
अहिले बजारमा हेर्ने हो भने कोभिड नियन्त्रणको कुनै पनि शर्तकता अपनाईएको देखिदैन । न त मास्क लगाइएको छ, न भीडभाड नियन्त्रण छ । न साबुन पानीले हाथ धुने व्यवस्था छ, न कतै सेनिटाईजरको व्यवस्था । सरकारी कार्यालय होस वा प्राईभेट भिड उतिकै छ । हो जिवन चलाउनका लागि काम गर्नै पर्ने बाध्यता छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि बजार चलाउन आवश्यक । पार्टी चलाउनका लागि राजनितिक कार्यक्रम पनि गर्न जरुरी छ तर शर्तकता अपनाएर पनि त्यो काम गर्न सकिन्छ । मास्क लगाएर पनि बजार जान सकिन्छ । सिमित मात्रामा भोज विवाह ब्रतबन्ध गर्न सकिन्छ । की महामारीको बेला मात्रै हो हामीलाई पिड हुने । के हामी विर्सेकै हो त महामारीको पिडा ?
वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमण घटेपछि मास्क लगाउने, सामाजिक दुरी कायम गर्नेजस्ता सावधानी अपनाउन छोडिएको छ । यस्तो लापरबाहीले कोरोना संक्रमण फैलन मद्धत गर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । ‘सामान्य रुघाखोकी, ज्वरोको लक्षण देखिएकाको पीसीआर परीक्षण गराउँदा पनि पोजेटिभ आएको छ । कतिपय जोखिम क्षेत्रमा पुगेर आएकामा संक्रमण देखिएको छ । त्यसैले हामीले कोरोनामैत्री व्यवहार त्याग्नुपर्छ, नत्र संक्रमण भुसको आगो जसरी फैलन सक्छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय यात्रु शाखाका अनुसार पुस ११ गतेदेखि १७ गतेसम्म नयाँ वर्षको आसपासमा एक हजार तीन सय ८६ वटा सवारी साधन भित्रिएका थिए । वीरगञ्जको मुख्य नाकाबाहेकका अन्य नाकाबाट समेत भारतीय सवारी साधन लुकीछिपी आउने गरेका छन् । नयाँ वर्षमा भारतबाट नेपाल आएका मध्ये ५ प्रतिशतमा मात्रै संक्रमण रहेछ भने पनि त्यसले वीरगजमा संक्रमण बढाउन ठुलो भुमिका खेल्न सक्छ ।
वीरगञ्ज नाकाबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा मानिसहरु ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन् । भारतको बिहार राज्यबाट मात्रै होइन, अन्य राज्यबाट समेत दुवै देशका सर्वसाधारण नेपाल भारत ओहोर दोहोर गरिरहन्छन् । नाका हुँदै आउने मानिसहरुले खोप लगाए नलगाएको, पीसीआर गराएको वा नगराएको जाँच गर्न जनशक्ति अपुग छ । भारतीय नागरिकले नेपाल आउँदा अनिवार्य पीसीआर रिपोर्ट र खोप लगाएको प्रमाण लिएर आउनुपर्ने भनिएपनि त्यो कार्यान्वयनमा छैन । नाकामा सीमित संख्यामा गरिने एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा दैनिक संक्रमित भेटिने गरेको नाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । यस्तो अवस्थमा हामी स्वयम शर्तक र सुरक्षित रहन जरुरी छ होइन भने यो महामारीले फेरी पनि ठुलो क्षति हुदैन भनेर भन्न सकिदैन ।